मान्छे मरिसकेपछि के हुन्छ .? पढ्नुहोस ! – Latest News, Video, Entertainment,Health
September 10, 2019 September 10, 2019 Info-Kantipur	0 Comments
मानिस को मिर्त्यु पछी के हुन्छ हामीलाई थाहा नहुन सक्छ अचम्म लाग्छ मान्छे मरिसकेपछि के हुन्छ भन्ने प्रस्न सुन्दा हामीहरु कहिले काही सुन्ने गर्छौ कि मानिस म*रेपछि अर्को जन्म मा सर्प, गाई भैसी लगाएत अन्य जनावर हरु बन्छ भनेर तर हामीलाई थाहा छैन कि हामि अर्को जन्म मा के बन्छौ ।
हाम्रो मृ*त्यु पछी के हुन्छ भन्ने कुरा को बारेमा गौतम बुद्द ले दिएको उपदेश उहाले मिर्त्यु पछी के हुन्छ भन्ने बारेमा उपदेश दिनुभएको छ पुरा पढ्नुहोस ! एकपटक बुद्ध आफ्ना शिष्यका साथमा संवादमा व्यस्त थिए । उनीहरू बुद्धसित अनेक प्रश्न सोधिरहेका थिए । बुद्ध पनि यथोचित उत्तर दिएर उनीहरूको जिज्ञासा शान्त बनाइरहेका थिए ।
यसै क्रममा एक शिष्यले उनलाई सोधे– भगवान्, तपाईंले आजसम्म हामीलाई धेरै कुराको ज्ञान दिएर बाटो देखाउनुभएको छ ।हामी पनि हजुरजस्तो महान् गुरुका शिष्य बन्न पाउँदा धन्य भएका छौँ । तर, हजुरले आजसम्म हामीलाई मानिसको मृत्युपश्चात् के हुन्छ भन्ने विषयमा केही पनि बताउनुभएको छैन । यस विषयमा केही जान्न पाए हुन्थ्यो प्रभु !
अचानक कतैबाट आएर एउटा विषालु वाण उसको शरीरमा घुस्यो । यस्तो अवस्थामा उसले तत्काल के गर्नु उचित हुन्छ ? पहिले शरीरमा घुसेको वाण हटाउनु ठीक हुन्छ कि त्यो वाण कसले चलाएको थियो, कताबाट आएको थियो र कसलाई लक्ष्य गरेर चलाइएको थियो, त्यो पत्ता लगाउनु उचित हुन्छ ?
प्रश्नकर्ता शिष्यले जवाफ दिए– उसले सबैभन्दा पहिले शरीरमा घुसेको वाण निकाल्नुपर्छ । अन्यथा वाणको विष पूरै शरीरमा फैलिएर उसको ज्यानै पनि जान सक्छ । शिष्यको जवाफ सुनेपछि मन्द मुस्कुराउँदै बुद्धले भने– तिमीले बिल्कुलै ठीक भन्यौ । अब तिमी मलाई अर्को एउटा प्रश्नको जवाफ देऊ । हामीले सबैभन्दा पहिले यस जीवनका दुःखको निवारणको उपाय खोज्नु ठीक हुन्छ कि मृत्युपछि के हुन्छ भनेर टाउको दुखाउनु ठीक होला ? बुद्धको प्रश्न सुनेपछि शिष्यको जिज्ञासा शान्त भयो ।
एउटा यस्तो अनौठो देश जहा मानिसहरु एक पटक सुते पछि महिना दिनसम्म पनि उठदैन् !
सामान्यतया एक स्वस्थ मानिसले दिनमा ८घण्टा सुत्नु राम्रो हुन्छ । यदी तपाई दिनमा ६ घण्टा भन्दा कम सुत्नुहुन्छ भने त्यो स्वास्थ्यका लागि गलत हो । तर दिनमा आठ घण्टा भन्दा धेरै सुत्नु राम्रो हुँदन तर सुताई उमेरमा भर पर्ने कुरा हो । हामीले भनेको आठ घण्टा एक वयस्क व्यक्तिका लागि हो । सुत्ने कुरामा बच्चा धेरै सुत्नुपर्दछ भने बृद्ध अवस्थामा कम सुत्दा पनि फरक नपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
सुत्ने कुरामा वर्तमान समयमा एक अजिब गाउँ फेला परेको छ । काजगिस्तानको एक गाउँमा एक पटक सुते पछि मानिसहरु महिना दिनसम्म पनि उठदैन् । काजगिस्तानको उत्तरी क्षेत्र कलाची गाउँका मानिसमा रहस्यमय तरिकाले सुत्छन् । जव यिनीहरु एक पटक सुत्छन एक महिनासम्म उठ्दैनन् । यसलाई रोग नै मानिएको छ ।
कलाचीमा सन् २०१० मा पहिलोपटक यस्तो भएको थियो । त्यसबेला बच्चाहरु अचानक स्कूलमा ढलेर निदाएका थिए । त्यसयता यस्ता बिरामीको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । धेरै वैज्ञानिक तथा चिकित्सकले यसरी महिना दिनसम्म निदाउनुको कारण खोजिरहेका छन् । तर, पत्ता लागेको छैन । अझ अचम्मत जसलाई यो रोग लागेको छ उसलाई निदाउन लागे भन्नेसमेत थाहा हुँदैन ।
← सनी लियोनीका यी हुन् २३ गोप्य कुरा
डेंगुबाट यसरी बचौँ, सेयर गरेर अरुलाईपनि बचाऊः डा. कल्याण →